Tekinoloji: Ebumnuche Dị Mfe, Ọ bụghị Mgbe Ngwọta | Martech Zone
Teknụzụ: Ebumnuche Dị Mfe, Ọ bụghị Mgbe Ngwọta Ya
Ọnọdụ azụmahịa taa siri ike ma bụrụ nke na-enweghị mgbaghara. Ma ọ na-akawanye njọ. Ọ dịkarịa ala ọkara nke ụlọ ọrụ ọhụụ ahụ toro na akwụkwọ ochie Jim Collins Wuru na Ikpeazụ abanyela na arụmọrụ na aha ya n'ime afọ iri kemgbe e bipụtara ya.
Otu n'ime ihe ndị m chọpụtara bụ na ole na ole n'ime nsogbu siri ike anyị na-eche ihu taa bụ otu akụkụ - ihe yiri ka ọ bụ nsogbu teknụzụ anaghị adịkarị mfe. Nsogbu gi puru igosi onwe ya na technology arena, ma ọtụtụ mgbe m na-ahụ na e nwere ndị mmadụ na usoro akụkụ nke nsogbu ahụ.
Dịka ojiji nke teknụzụ tozuru oke, ọ banyela na usoro azụmahịa ọ na-akwado. N’otu aka ahụ, mgbagwoju anya nke azụmahịa achụgoro usoro dị mgbagwoju anya nke naanị site na teknụzụ ọkaibe na ndị zụrụ azụ ga-akwado.
Ndi amu amuru ndi ndu. A na-eme ha dịka ọ bụla ọzọ, site na ịrụsi ọrụ ike. Ma nke ahụ bụ ụgwọ anyị ga-akwụ iji nweta ebumnuche ahụ, ma ọ bụ ebumnuche ọ bụla. - Vince Lombardi
Ihe mmuta n'ime ihe a nile bu na teknụzụ n'onwe ya abughi mgbọ ọlaọcha maka nsogbu ọ bụla azụmahịa gị chere ihu. Ọ na-enye a na-akpata ọnwụnwa ngwọta n'ihi na ị nwere ike ịzụta ya ma ọ bụ outsource ya. N'ụzọ dị iche, idozi nsogbu ndị mmadụ na usoro azụmaahịa chọrọ ịrụ ọrụ siri ike.
Tags: Gbanweenyocha dataNdabere dataỊdị ọchammemme ahiaAdreesị ọhụrụechichedepụta ịdị ọchaakwụkwọ ahịaMobile na Mbadamba ụrọChọọ Marketinggbasiaron
Harry Howe nwere obi uto banyere ochichi ma na-akwado obodo anyi nke ndi oru ahia. Dị ka onye isi oche nke Howe Nduzi, ọ na - enye ndị na - azụ ahịa azụmaahịa na - ahụ maka enyemaka nke ndị merụrụ nke ọma ha, na - arụ ọrụ n'akụkụ ha iji zụlite usoro azụmaahịa, na - akwado teknụzụ, yana ndị ga - akwado azụmahịa ha ogologo oge.
Facebook Dị ka Button na WordPress Integration
Enwere Innovation Ebe a na Silicon Prairie